Baaq ka soo baxay nawdo diimeed oo ka socotay magaalada Garoowe | Waayaha
You are here: Home 2013 December Baaq ka soo baxay nawdo diimeed oo ka socotay magaalada Garoowe
Culimada Puntland ayaa waxa ay ka soo saareen bayaan ku socda Issimada Puntland, Musharaxiinta , xubnaha baarlamaanka cusub ee imaan doona, gudiga khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha baarlamaanka kadib Nadwo cilmiyeed diini ah oo ka socotay masjidka Xaaji Cali ee magaalada Garoowe muddo 4 cisho ah.
Waxa ay ugu baaqeen shacabka ku nool Puntland in ay dhammaantood ay si wada jir ah uga qeyb qaataan sugidda amniga iyo nabadgelyada dalka , si looga fogaado wax walba oo keeni kara amni darro
Waxa uu ka koobnaa bayaanka ay soo saareen culimada ilaa 21 qodob.
Hoos ka akhriso bayaanka oo dhammeystiran
2. Isu soo dhoweynta guud ahaan ummada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer Puntland iyo xasuusinta iyo ku boorrinta waajibaadka iyo xuquuqda islaamnimo, walaalnimo iyo xigto ee ka dhexeysa. 3. In loogu nasteexeeyo cid walba oo rabta in ay ummadda xil u qabato loona tilmaamo mas’uuliyadda iyo amaanada culus ee ay holliyeen. 4. In bulshada lagu baraarujiyo in danaha gaar ahaaneed ay ku hirgalayaan helitaanka danta guud ee bulshadu leedahay.
4) Waxaan bulshada xasuusineynaa sidii ay isugu gurmadeen xilligii duufaantu ku dhufatay Puntland iy fatahaaddii wabiga ee shabeellada dhexe ay astaan cad u tahay in wax wada qabsi oo kaliya lagu gaari karo waxa naga maqan. Musharraxiinta jagada madaxweynenimada Puntland.
Isimmada 14) Isimmadu waxay u ahaayeen mandiqadan, yihiinna marjic lagu kalsoon yahay qeybna ka ah xasilloonideeda, sidaa darteed waxaan ugu baaqeynaa inay ilaashadaan tilmaamahaas wanaagsan ee lagu bartay, xalkana ay qeyb ka noqdaan.
“Kuwa balankii iyo dhaartii alle ku iibsanaya lacag yar kuwaas aduun iyo aaqiraba uma sugnaan nasiib, allena lama hadlayo maalinta qiyaamaha , alle ma dhahirayo waxaana u sugnaaday kuwaas cadaab xanuujiya”..aayadda 66aad ee suurada Al-Cimraan.
21) Waxaan ugu baaqeynaa in uu ilaaliyo ballanta amaanada iyo xilka Alle hortii kaga aaddan iyo kan bulshada labadaba. Ilaahay ayaa mahad leh ay galladdiisu wanaagyadu ka ebyoomaan.
Sh. Daahir Aw-Cabdi Aw-Yuusuf
Sh. C/Naasir X. Axmed Maxamed
Sh. Maxamuud X. Yuusuf Maxamed
Sh. Maxamed M. Axmed Xuseen
Sh. Axmed Yuusuf Daad
Sh. Maxamed Maxamuud Ciise
Sh. C/Salaam Maxamuud Cartan
Sh. Mukhtaar Axmed Faarax
Sh. Maxamed Cali Axmed
Sh. Dalmar Guureeye Kaarshe
Sh. Cabdi Xirsi Cali